Sheeko, sheeko Q. 4aad: Gaso, Ganuun, Gasiin (Prof. Cali Jimcaale Axmed) | Somaliwayn	Home
Monday, August 29th, 2016 | Posted by admin | 512 views	Sheeko, sheeko Q. 4aad: Gaso, Ganuun, Gasiin (Prof. Cali Jimcaale Axmed)
Waa waqlal magacbixinteedu ka sal weyntahay mid qof ku kooban; waa magacbixin wadareed, sidoo kalena u baahan sulux iyo heshiis waabaayo miir ah. Magacbixin mug weyn oo lagu soo alooso isir horleh, guubaabo gaaxmaala. Utun bixin saar katumiskeedu dalbado ama dihdo wax ka weyn wan jara. Saar katumis lagu iidaamo wilisaqo, shabshable, dowladamiin, dhaanto, surow, gebley shimbir, bullo, wilgo. Damaashaad! Mashxarad lagu malaxbixiyo laxaw aad ka maagtay. (Waxaa hadda qalaw igu soo yiri in tamaashaad Af Hindi yahay, lana macnayahay dabbaaldeg. Sida kuwo kaloo badan oo ay wadaagaan labada af, sida: gaari, bak-bak (baq-baq), daash (desh, waa Bengaali), doobbi, arre (arreey!), iwm. Dan kama lihi meesha asal ahaan laga soo minguuriyay iyo ciddi eraybixinta ku horreysay.) Waxaanse mugdi ku jirin in degaanka Wabarka wabarada calool u ahaa is-dhexgalka duni da’weyn oo laheyd taariikh fil iyo firkeedu fogyihiin. Haddaad doonto wax ka weydii aqoonyahan iyo dhaqan aqoon u dhuun duleela tabihi hore iyo dhaxal kaweyn wax shood ama suus lagu beego. Weydii ta’wiilkeeda awyo iyo waayeel iyo wax-garad wax ka sheegay, ama ka faaliya mindhicir xoolaad, waayo tegay, mid jira, iyo mid soo socdaba. Afeef: waxa ay kuu sheegaan kurtigood walfi oo walqi oo sida badar u haati. Budada xaarinka ku soo hartaa beego oo biyoqabe u doono.
Sheekadii wabarka tusaale u qaado. Waxaa la yiri, wabarku waa u sinnaayeen sibiga uu dhalay iyo kii jiidkale ka yimid. Intaad jirtay maalinti uu kahsaday ama qoonsaday wiil uu isagu dhalay. Cali ayaa soo baxay caniid xaax iyo qaati laga joogsay. Waa adduun iyo xaalkiisee, xantaada ma ogaatid jeer ay dhuunloo dhan soo marto. Wabarki ayaa loo sheegay in Cali cinaad iyo hagardaamo dadki ku haayo. Cood iyo caano beel, waa kii hoos u yiri. Laba maalin kadibna waa tii la soo sheegay in yaxaas doolihi Cali la tegay. Wabarki ayaa uriyaaqay neecawda qabow ee dadkiisu heleen. Bal ufiirso. Waa aabe ganuunyadiisi mid ka midihi la genbiyay. Gasariir ama arxandarro kama aheyn. Waa nin xil qaaday eed qaad. Kaad kabo katolaneyso kobahiisa la fiirshaa. Ka ilaali in kaad kabo ugelisaaba kurtumo yeesho. Ogow in taariikhdu marmar is-naqtiimiso. Gobeey ina Biyow Yerow waxay tiri: Darbanaaw Alkahaf Dahar/Dil aas kuu dambeeynin/Diiqyeerki abkaa la dilay/Diiqyeerkiis waaye.
La soco Q.5aad
Halkan ka Akhriso Qeebtii 3aad Sheeko, sheeko Q.3aad: Gaso, Ganuun, Gasiin (Prof. Cali Jimcaale Axmed)
Short URL: http://somaliwayn.org/?p=42468